authorities vow ongoing Daw Suu dialogue ‎ | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Save the Irrawaddy river!	Minister Kyaw San in various action →	authorities vow ongoing Daw Suu dialogue ‎	13
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အာဏာပိုင်တို့ ဆက်လက်ညှိနှိုင်းမည်
သြဂုတ် ၁၂၊ ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလက အခမ်းအနားတခုတွင် တွေ့ရသော ဦးကျော်ဆန်း (ဓာတ်ပုံ- ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်)
မြန်မာအာဏာပိုင်တို့က ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆက်လက် စကားပြောမည်ဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်း နိုင်ငံတွင်း လာရောက်ခွင့်ပြုဟု ယနေ့ ပြောကြားလိုက်သည်။ ရှားရှားပါးပါး ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြန်ကြားရေးဝန် ဦးကျော်ဆန်းက ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အမည်ခံ အရပ်သားအစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရလဒ်ကောင်းများ ထွက်ပေါ်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်းလည်း ပြောကြားလိုက်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် တို့ ယနေ့ တွေ့ဆုံမှု မပြုမီ ထိုသို့ ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ “ပြည်သူလူထု အကျိုးရှိစေဖို့အတွက် ကျနော်တို့က ဒီလို တွေ့ဆုံမှုတွေ ဆက်လုပ်သွားမှာပါ” ဟု ဦးကျော်ဆန်းက ဆိုသည်။ နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် အစိုးရသစ်၏ ပထမဆုံး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ သတင်းသမား ၅၀ ခန့်၊ အရာရှိ ၂၅၀ ၀န်းကျင် တို့ကို ဖိတ်ကြားသည်။ ကုလ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနားလည်း မြန်မာပြည်လာခွင့်ရမည်ဟု ဦးကျော်ဆန်းက ဆိုသည်။ လာမည့်အချိန်ကို မပြောပေ။
ကင်တားနားသည် မြန်မာပြည် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေကို စုံစမ်းရန် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက မြန်မာပြည်သို့ နောက်ဆုံး သွားရောက်ခွင့်ရခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်တို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံရေးနှင့် ဝေးဝေးနေရန် ဇွန်လက သတိပေးချက် ထုတ်ထားသော်လည်း အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် နှင့် မကြာသေးမီက ပထမအကြိမ်
တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပေါ်လာရာ ပိုမို ရင်ကြားစေ့လာသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်လာသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း နိုင်ငံရေးဆက်လုပ်ရန် အချက်ပြပြီးဖြစ်သည်။ လာမည့် ၂ ရက်အတွင်း နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်တခုအတွက် ရန်ကုန်မြို့ပြင်သို့ထွက်မည်ဖြစ်သည်။ ၇ နှစ်ကြာ ထိန်းသိမ်းခံရရာမှ ယမန်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ပြန်လွတ်လာပြီးနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးပြုလုပ်မည့် နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်လည်း ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အားစမ်းသည့်အနေဖြင့် ဇူလိုင်လက ပုဂံသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ထိုခရီးစဉ်က နိုင်ငံရေးခရီးစဉ် မဟုတ်ပေ။ သဘက်ခါသွားရောက်မည့် ပဲခူး နေ့ချင်းပြန်ခရီးစဉ်က နိုင်ငံရေးခရီးစဉ် ဖြစ်သည်။ စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ပြီး လူငယ်ကွန်ရက် အဖွဲ့ဝင်တို့နှင့်လည်း ဆုံမည်ဟု သူ၏ ပါတီ NLD က ပြောသည်။ သူက တိုင်းရင်းသားသူပုန်တို့နှင့် စစ်တပ်အကြားရှိ ပဋိပက္ခတွင်လည်း ၀င်ရောက်စေ့စပ်ပေးလိုကြောင်း အိတ်ဖွင့်ပေးစာထုတ်ပြန် ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ယနေ့ အစိုးရ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲက သူ၏ပါတီ NLD နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြောဆိုသုံးနှုန်းမှုက ထူးခြားနေသည်။ NLD ကို တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး “အစိုးရက တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ NLD ကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီနေပါတယ်” ဟု ဦးကျော်ဆန်းက ပြောလိုက်သည်။ NLD က ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ခဲ့သဖြင့် တရားဝင်ပါတီအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ခံရသည်။ NLD သည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်သော်လည်း အာဏာ အလွဲမခံခဲ့ရပေ။ (နေပြည်တော်မှ ရေးသားပေးပို့သည့် AFP ၏ Myanmar vows ongoing Suu Kyi dialogue ကို ဆီလျော်စွာ ဘာသာပြန်သည်။) Myanmar vows ongoing Suu Kyi dialogue
NAYPYIDAW — Myanmar’s army-backed regime held out an olive branch to its critics, pledging to continue talks with democracy icon Aung San Suu Kyi and to allowavisit byaUN human rights envoy. Inarare news conference, information minister Kyaw Hsan on Friday said the nominally civilian government, which came to power afteracontroversial election last November, hoped to get “successful results” from cooperating with Suu Kyi. The comments came shortly before Suu Kyi and labour minister Aung Kyi beganasecond round of talks in Yangon. “We will continue these kinds of meetings for the benefit of the people,” Kyaw Hsan told around 50 reporters and some 250 officials invited to the new government’s first media briefing in the capital Naypyidaw since taking power. Kyaw Hsan said Tomas Ojea Quintana, UN special rapporteur on human rights in Myanmar, who was last allowed into the country in February 2010, would return without specifyingadate. Suu Kyi was warned by the regime in June to stay out of politics but the first round of talks with Aung Kyi appeared to strikeamore conciliatory tone. She has also signalled her intention to remain in politics and Friday’s meeting comes two days before she is due to make her first overtly political trip outside Yangon since she was freed from seven straight years of house arrest in November. The Nobel Peace Prize winner first tested her freedom withavisit to an ancient temple city in central Myanmar in July, although politics was not officially on the agenda. Her one-day excursion to the Bago region, about 80 kilometres (50 miles) north of Yangon, on August 14 — where she is due to attendalibrary opening and meet members ofayouth forum — will be political, her party has said. She has also issued an open letter offering to help broker peace in conflicts between the military and ethnic minority rebels. Her National League for Democracy (NLD) was also spoken of in unusually warm terms by Myanmar’s army-backed rulers on Friday. “While the government is struggling for national reconciliation, it is giving assistance to the NLD as much as possible,” Kyaw Hsan said, urging the group to officially register asaparty. The NLD boycotted the election because of rules seemed designed to exclude Suu Kyi and was stripped of its recognition asapolitical party asaresult. The NLD wona1990 vote but was never allowed to take power.
Posted by oothandar on August 13, 2011 in Burma News Headlines
← Save the Irrawaddy river!	Minister Kyaw San in various action →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...